Akara | RayHaber | raillynews
HomeOzi okporo ụzọmkpado
Levent Özen - kọntaktị @rayhaber.com
Levent Elmastaş - onye nchịkọta akụkọ @rayhaber.com
Can Özen - nwere ike @rayhaber.com
Av. Lelee profaịlụ nke Alper Fırat
Anyị na 7 na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ dị ka onye odeakụkọ ọhụụ na nke anaghị ele mmadụ anya n’ihu. RayHaber Ebe nrụọrụ weebụ anyị abụrụla nnukwu ọnụ ụzọ mgbasa ozi nke na-anabata nkezi 50 puku ndị ọbịa pụrụ iche kwa ụbọchị, yana akụkọ 20 puku, akwụkwọ ahịa azụmaahịa kwa ụbọchị yana ebe nchekwa okporo ụzọ 30 kwa afọ. Nzube anyị bụ ime ka anyị 100 puku kwa ụbọchị ọbịa, saịtị ogo na mba banye Turkey mbụ na-agba ịnyịnya na saịtị.
Anyị na-arụ ọrụ maka ozi na azụmaahịa zuru oke maka afọ 7. RayHaber ibe weebụ nwere ihe karịrị akụkọ 50.000, akwụkwọ akụkọ dị nro kwa ụbọchị yana afọ 20 nke ụzọ ụgbọ oloko na-enweta nnukwu ọnụ ụzọ ya na ndị ọbịa pụrụ iche nke 30.000 kwa ụbọchị. Ebumnuche ọhụrụ anyị bụ ndị ọbịa 100.000 kwa ụbọchị ma ọ ga-anọ na saịtị 1000 na ndepụta weebụ saịtị mba niile.
RayHaber.com kwere nkwa irube isi na ndi isi oru ndi oru nta akuko.
A na-ebipụta peeji ozi anyị dabere na Iwu nke 5846 na Nkà na Ọrụ Nkà. Nwetakwa ma na-ebipụta akụkọ sitere n'ụlọ ọrụ dị iche iche na-achọ ikike ederede ede tupu ebumnuche nke ụlọ ọrụ dị mkpa. RayHaberisi edemede na edemede ndị ọzọ edepụtara na RayHaberenwere ike ibugharị ya na ọnọdụ na enyere njikọ njikọ peeji nke .com. RayHaberNdi dere akwukwo bu ndi n’ebu ihe banyere ihe edeputara na .com.
Saịtị anyị na-anọpụ iche ma na-agwa ndị na-agụ ya naanị ihe mere na ihe ndị mere na ozi ọma nke ọ na-ebipụta ma na-aga n'ihu na-ebipụta. Ebumnuche ya ịkọwa ma gosipụta ya maka ndị na - agụ ya na-enweghị mmetụtara ọ bụla. RayHaberỌdịnaya posted .com 100% na-ebipụta na dabere na iwu nke Republic of Turkey, ọ bipụtara nile di iche iche nke ihe oyiyi, ihe ọmụma, na ozi ọma si na nwebisiinka nwe nri ederede a na-ebipụta site na inweta e dere ikike.
RayHaber.com, saịtị anyị, ozi, iwu, nwebiisinka na ikike mmadụ nwere ịkwanyere ugwu ugwu. Saịtị anyị na-arụ ọrụ dị ka 'onye na-eweta ọdịnaya' dị ka akọwara n'iwu iwu 5651. Dịka iwu dị mkpa si dị, iwu ejighi nchịkwa saịtị ịchịkwa ọdịnaya iwu akwadoghị. Ya mere, saịtị anyị anakwerela 'ịdọ aka na ntị ma wepu' ya. Mkpakọrịta ndị nwe ikike ndị nwere obi abụọ banyere eziokwu nke akụkọ ahụ ma chee na ekesara ikike nwebisiinka n'ụzọ iwu na-akwadoghị yana iwu mebiri, ozi @Rayhaberadreesị ozi .com ma ọ bụ Kpọtụrụ ha. Ọka ikpe gị ga-enyocha mkpesa na arịrịọ gị yana aga-ewepụ ọdịnaya ndị a na-eche na ha na-emebi emebi na weebụsaịtị anyị ozugbo.
© Copyright 2018 RayHaber.com Ikike niile echekwabara. Edemede nke ọdịnaya niile dịka koodu, akụkọ, eserese, ajụjụ ọnụ RayHaber.na. RayHaberEdemede, ihe, onyonyo, faịlụ ọdịyo, ihe nkiri, vidiyo, atụmatụ na nhazi na saịtị ahụ .com na-echebe site na iwu nwebisiinka 5846. ndị a RayHaber.com nwere ike ghara i coomi, kesaa, gbanwee, bipụtara ya n'ụzọ ọ bụla na-enweghị ikike edere nke .com. Ikpokọ na iji ya enweghị ike ịme ya na enweghị ikike yana enweghị ịkọwapụta isi mmalite ahụ.
Anyị ga-edobe ozi gị nzuzo. Ohaneze, anyị ga-eji ozi gị naanị n'ime RayHaberM atụ. Ma, mgbe ụfọdụ RayHaber.com na-eji ndị ọzọ hazie ozi gị. RayHaber.com choro ka ndi ozo mee ihe nlebara anya na ntuziaka ya RayHaber.com choro ka ha ghara iji ozi nkeonwe gị. Mgbe gị na ya na-emekọ ihe RayHaber.com mgbe ụfọdụ anyị na-enweta ozi nkeonwe gbasara gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị degara anyị akwụkwọ ma ọ bụ debanye aha akwụkwọ akụkọ, ị nwere ike ịgwa anyị onye ị bụ, otu anyị nwere ike isi kpọtụrụ gị na ihe ị chere. Mgbe ị na-eji RayHaber.com ntanetị, anyị na-eji kuki ma na-anakọta adreesị IP. Nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ gbasara nke a RayHaber.com kuki ngalaba nke Nzuzo nzuzo anyị zuru oke.